Tsy mitsahatra maneho hevitra momba izany ireo antoko politika sy fikambanana samihafa eo anivon’ny fiarahamonina sivily na koa ny sehatra tsy miankina. Teboka iombonan’ny rehetra kosa anefa ny tsy maintsy hirosoana amin’ny fifidianana amin’ny taona 2018. Voakasika manokana ireo antoko politika vonona handray anjara amin’ny fakana fahefana manaja ny fenitra demokratika. Manampy betsaka amin’izany rahateo ny dinika karakarain’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni. Manana ny heviny amin’ny fiatrehana io fotoan-dehibe io rahateo ireo solontenan’ny antoko politika. Hoy indrindra izy ireo :
Raharinavalona Mamy Mamonjy (TIM) : «Tsy tokony hiverina intsony ireo olana mpitranga isan-karazany toy ny fampiasana kara-pifidianana hosoka, ny tsy fanomezana ny delegen’ny antoko politika ny tatitry ny fizotran’ny fifidianana na koa ny fanodinkodinana voka-pifidianana amin’ny endriny samihafa».
Razafimahefa Herimanana (MAPAR) : «Ho mailo tanteraka izahay, indrindra mialoha ny fifidianana. Manjaka mantsy ny fanilikilihana ireo antoko tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra amin’ny famolavolana ny lisi-pifidianana. Ny 60%-n’ny hosoka dia tranga mpiseho matetika mandritra ny fikirakirana ny lisi-pifidianana rahateo».
Toto Alphonse (LEADER FANILO) : «Gidragidra foana ny fifidianana eto Madagasikara tao anatin’ny 20 taona mahery izao. Zava-dehibe ny fitovian’ny antoko politika eo amin’ny lafiny famatsiam-bola. Tsara ho an’ireo tsy ampy hoenti-manana ny tsy mandray anjara toy izay hibata 0,... %. Betsaka ny nifampiresahana tamin’ny Ceni ka anjaran’ny fanjakana ny manatontosa ny andraikitra tandrify azy».